Amathiphu kanye nezindlela zokupheka, indlela yokushesha ngokushesha nokupheka kalula i-khachapuri
Recipe ezosiza ukupheka i-khachapuri okumnandi.
Iparele nesidlo esinendawo ekhethekile yokudla ngesiGeorgia yikhachapuri. I-recipe ye-classic ye-khachapuri ihlanganisa imikhiqizo kazwelonke yaseGeorgia, engatholakali kalula lapha: i-matzoni (umkhiqizo wobisi ovela eGeorgia) kanye ne-Imeretian ushizi.
Akukwesabeki, i-matzoni ishintshwe nge-kefir esitolo esivamile, kanti ushizi lwe-Imeretian - ngokujwayelekile nge-cottage shizi noshizi noma i-Adyghe. Ukulahlekelwa ukunambitheka akunakunqunywa. Yiqiniso, uma wazi izindawo lapho ungathola khona imikhiqizo yezwe yaseGeorgia yemvelo yekhasipuri ngezintengo ezifanele, lokho kuyamangalisa.
Indlela yokupheka inhlama ye-khachapuri ku-kefir?
Ngaphambi kokuba uqhubekele emibhalweni yesinyathelo ngesinyathelo sendlela yokwenza i-khachapuri, ake sibheke inhlama bese sicabanga ngale mzuzu ngokwehlukana, ngoba lokhu kuyi-nuance ebaluleke kunazo zonke cishe konke okuxhomeke kukho.
Umfula - izinkomishi ezi-3, lapho izinkomishi ezingu-0.5 zihamba nge-podsypku;
I-Kefir - ingilazi engu-1;
I-egg - ucezu olulodwa (uma amaqanda amancane, thatha umbhangqwana);
Usawoti - 0.5 amathisipuni;
Ishukela - 1 ithisipuni;
I-soda - 0.5 ithisipuni
I-Baking Powder - 1 ithisipuni yokupheka i-isipuni;
Amafutha e-sunflower - izipuni ezimbili.
Hlanganisa ne-yogurt yogurt, i-soda nosawoti bese uxuba kahle, okwenza kube nokuvumelana okuhambisanayo;
Yengeza iqanda kanye nezipuni ezimbalwa zamafutha we-sunflower, uvuselele futhi kuze kube yilapho izithako ziphenduka ubukhulu obukhulu;
Kancane kancane sihlunga ufulawa sibe yingxube, sishukumisa njalo. Ekugcineni, engeza zonke izinkomishi ezingu-2.5 kanye ne-spoon ye-baking powder;
Knead inhlama. Kufanele uthole ukunamathela kancane, ngakho ungesabi;
Iziqephu zokuhlolwa zomphumela wenhlama ziboshwe ngephakethe noma ifilimu yokudla, eshiya isigamu sehora ngehora lokushisa lama-20-25 degrees. Ungayifaki esiqandisini, akusizi ngalutho;
Emva kwesikhathi esifanele, vula ifilimu bese uhlukanisa inhlama zibe izingxenye eziningana. Esikhathini sethu, kuvela izicucu ezingu-4-5, okudingayo ukuphuma ku-kruglyashi.
Ukuvuna akusithathi isikhathi esiningi. Konke kuzokwanela imizuzu engu-40. Ngezansi sicabangela ukulungiswa okulungile kwekhasipuri yesilasi nge shizi.
Indlela yokupheka khachapuri ekhaya nge ushizi?
Iresiphi ethandwa futhi yendabuko, okubhekwa njengenye yezinambitheka kunazo zonke. Ukwengeza okuhle kakhulu etafuleni, ekhonzwa ngendlela yokudla, isitsha esivela eceleni noma okuyinhloko.
Brynza - 200 amagremu;
I-Curd - 200 amagremu;
Ukuhlwanyela - imifula embalwa;
Ulungisa inhlama ngokusho iresiphi ngenhla;
Ngemuva kokuba uhlukanise inhlama "ephumule" ibe yizingcezu eziningana (4-5), uwafake emincumbeni encane enemijikelezo. Qaphela ukuthi akufanele kube mncane kakhulu, ngaphandle kwalokho ukugcwaliswa kuzokwehla ngesikhathi sokuxhaphazwa okuqhubekayo;
Kwelinye isitsha, faka amagremu angama-200 we-cottage ushizi noshizi, imifino eqoshiwe futhi uhlanganise kuze kube yilapho ubushelelezi;
Ngezandla zakho, ubuhlalu bezinhlangothi zombili ushizi noswidi we-cottage bese uwabeka phakathi kwenhlama efakwe embuthanweni. Qaphela, amaqebelengwane ashizi kufanele afane nobungako ukuze imiphetho yenhlama uma iguqula ukuguqulwa. Kufanele itholakale njengesithombe sokupheka khachapuri ngezansi;
Cindezela inhlama enesundu futhi uqale uqale ukuphuma. Ubukhulu obujwayelekile akumele bube ngaphezu kuka-1 cm;
Sishisa i-pan yokuthosa phezu komlilo ophakathi bese ubeka inhlama egoqwe phezu kwayo. Indawo ye-pan yokudoba akudingeki ukuba ibhaliswe;
Fry the tortillas zombili izinhlangothi;
Ngemuva kokuthi ususe i-pan yokuthosa emlilweni, kuyilapho ikhekhe lisashisa, gcoba kahle ngebhotela;
Le recipe yokupheka khachapuri nge ushizi ekhaya iphelile. Jabulela ukunambitheka okuyingqayizivele kokudla kweGeorgia. Bon appetit!
Recipe for duck ophekwe ngama-apula
Home Dietary Ungadliwa Ungadliwa
Ama-appetizers ama-festive kanye nezifundo eziyinhloko
Zokupheka okumnandi nsuku zonke
Ukwelashwa kwamakhaza kanye nezimpawu zabo
Amehlo amahle: makeup
Umlingisi omkhulu u-Anna Samokhina
Isinkwa sezinkwa saseMelika
I-Banana Cream dessert
Isitayela sangaphakathi: izisusa zaseMorocco ngendlela entsha
Izindlela zendabuko zokwelapha amathumbu
Amathiphu okukhulelwa kwengane